China Umngundo Yijie R-90 yangaphakathi additive Mould Release Agent Series mveliso kunye nabenzi | Yinuoxin
Ukwakhiwa: Umxube wesinyithi osekwe kwisepha
Umbono wangaphandle: umgubo omhlophe okanye amasuntswana
Ixesha lokugcina: iminyaka emibini
Iphakheji: Iphepha lokudibanisa iphepha lephepha
Ukusinda okushiyekile: 25 kg / ingxowa
Uhlobo irabha esebenzayo
Irabha yendalo (i-NR), irabha ye-butadiene (i-BR), i-Styrene-Butadiene Rubber (SBR), i-Isoprene Rubber (IR), i-Neoprene Rubber (CR), i-Butyl Rubber (IIR), i-EPDM, i-chlorosulfonated polyethylene rubber (CSM), iFluororubber (FKM ), irabha yerabha (i-NBR) kunye nerabha erisayikilisha inokusetyenziswa kumavili kunye nezinye izinto zokubumba kunye neemveliso ze-extrusion.
Umngundo Yijie R-90 wongezwa kunye nezinto ngexesha lokuxuba.
1. Xa kuthelekiswa nezinye iiarhente ezonakalisayo, isikhunta i-Yijie R-90 sinomyinge ophezulu wokusebenza kwexabiso, ofanelekileyo kwiimveliso zerabha abathengi banazo iimfuno kwiindleko, kwaye banokunika abathengi indawo yenzuzo kangangoko kwisiseko sokuqinisekisa ukusebenza kunye nokusebenza. Emva kokudibanisa ukungunda Yijie R-90, ukungunda kungenziwa zonakaliswe ngaphandle kokusebenzisa arhente zangaphandle zonakalise, nto leyo ngokuzenzekelayo ukugcina ukungunda eliqaqambileyo, ngempumelelo ukuthintela ubumdaka corroding ukungunda nokwandisa ubomi inkonzo ukungunda.
2. Izinto zerabha ezongezwe ngesikhunta i-Yijie R-90 zenza uhlobo lwefilimu exhasa ifusion phakathi kwesikhunta kunye nezinto zerabha ngexesha le-vulcanization, enokuthi ifake ukungcola ngokufanelekileyo kunye nezinto ezingaziwayo ezenziweyo ekuvuseleleni ukuthintela ukungcola ekubambeni umphezulu ukungunda, ukunciphisa ukungcola komngundo.
3. Ukongeza izinto zeglue zesikhunta i-Yijie R-90 kunokukuthintela ngokufanelekileyo ukubambeka kunye nokungabikho kweglue okubangelwa kukusetyenziswa kwearhente yokukhutshwa kwangaphandle, kunye nokuphucula kakhulu izinga elifanelekileyo lemveliso.
4. Ukubumba i-Yijie R-90 kudityaniswa ngokwenani elifanelekileyo, elingachaphazeli kuphela ubulukhuni kunye namandla okuqina kweemveliso zerabha ezigqityiweyo, kodwa ikwanyusa iipropathi zeekhemikhali zeemveliso zerabha ezigqityiweyo, ezinjengeasidi kunye nealkali ukuxhathisa, ukumelana neoyile, ukunganyangeki kwamanzi kunye nokumelana neoksijini, kwangaxeshanye, inefuthe lokuqaqamba kwerabha yombala. Yomeleza ubunzima, amandla, ukuxhathisa i-abrasion kunye nokuphelisa amabala eemveliso zerabha.
5. Ukubumba i-Yijie R-90 inemisebenzi yokusasazeka kunye nokuphuculwa kokuhamba; Inokuphucula isantya sokucinezelwa, inyuse umphezulu ogudileyo werabha ecinezelweyo, kwaye unciphise iqabaza lokutshiza iqabaka.
6. I-Moyijie R-90 ayiyityhefu, kwaye isalathiso sihlangabezana ngokupheleleyo nomgangatho werabha yonyango.
Kumiselwa ngokobunzima bobume besikhunta kunye nenqanaba lokungcola kunye nobumdaka kumbumba:
Irabha yesiqhelo: njenge-NR, i-SBR, i-BR, i-IR, njl. Ngokwe-1.0 ~ 3.0% yemali yerabha eluhlaza
Irabha Halogenated: umzekelo, CR, NBR, FKM, njl, ngokutsho isixa yerabha ekrwada 2.0 ~ 5.0%
Egqithileyo I-Jiaoyisan Pr-85 Uthotho oludibeneyo lokuhambisa
Okulandelayo: Umngundo Yijie R-99 wangaphakathi owongeziweyo Umngundo wokuKhutshwa kweAgent Series01
Umngundo Yijie R-99 yangaphakathi additive zomngundo Release ...